Social Feed BrainWave ဉာဏ်လှိုင်း
About Global Community BrainWave ဉာဏ်လှိုင်း All Types Link Photo Video Gif Event Note BrainWave ဉာဏ်လှိုင်း
တိုယိုတာ၊ ဟီးနိူး နှင့် စာတိုက်ပုံးများ
အသစ် စက်စက် တိုယိုတာ မော်တော်ကားများကို ၂၀၁၈ နှစ်ဦးမှ စတင်၍ ပြခန်းကြီး ဖွင့်လှစ် ရောင်းချသွားတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ အရောင်းပြခမ်း နှင့် ပြူပြင်ထိမ်းသိမ်းရေး အတွက် မြေအကျယ် ၃,၃၀၀ စတုရန်းမီတာ အကျယ်ရှိ မြေကွက်ကြီး ပေါ်မှာ တည်ဆောက်သွားမှာ ဖြစ်ပြီး တိုယိုတာ ကားများရောင်းချရန် ဂျပန်ရှိ NEZAS ကုမ္ပဏီ မှ မြန်မာနိူင်ငံရှိ ဟင်္သာ ကုမ္ပဏီ နဲ့... View details ⇨ View details
1375 likes - 26 comments
Phyo Mg Mg today at 04:57 ကားက ကျတော်တို့လို အခြေခံလူတန်းစားနဲ့တော့ နည်းနည်းအလှန်းဝေးနေသေးတယ်ဗျ နီးစပ်တဲ့ဆိုင်ကယ်ကုမ္မဏီHONDA/ YAMAHA တို့မြန်မာနိူင်ငံအခြေစိုက်ထုပ်ဖို့အလားလာရှိဘူးလားဗျာ ခုဟာထိုင်း/အန္ဒိယထုပ် ၂၀ကျော် ၃၀ကျော် ၀ယ်စီးဖို့အင့်နေလို့ပါ
ခြောက် ရက် စစ်ပွဲ နှင့် အစ္စရေး၏ နှစ် ၅၀ ခရီး (၃)
ပီအယ်အို နဲ့ မတူပဲ အင်တီဖါဒါ လှုပ်ရှားမှုကတော့
အစ္စရေး လုံခြုံရေး တပ်ဖွဲ့ဝင်များ နဲ့ ပါလက်စတိုင်းတို့
အကြား ခဲ များ နဲ့ ပြစ်ပေါက်ခြင်း အဆင့်ပဲ ရှိပါတယ်။ သို့သော်လည်း ပါလက်စတိုင်းနယ်မြေ များကို အလွယ်တကူ ဆက်လက် သိမ်းပိုက်သွားနိူင်လိမ့်မယ်
ဆိုတဲ့ အစ္စရေး ရဲ့ စိတ်ကူးယဉ်မှုတွေ ပျက်စီးသွားခဲ့
၁၉၉၃ မှာ ပီအယ်အို... View details ⇨ View details
သဘောထားထုတ်ပြန်ချက် View details
1863 likes -5comments
ကာတွန်းတင်အောင်နီ View details
1441 likes - 15 comments
979 likes - 15 comments
1081 likes - 11 comments
သတင်းထောက် သုံးဦးအား ရှမ်းပြည် မြောက်ပိုင်းတွင် စစ်တပ်မှ ဖမ်းဆီးလိုက်ပြီ
အဆိုပါ သတင်းထောက် သုံးဦးသည် TNLA မှ ပြုလုပ်သော ကုလသမဂ္ဂ မူးယစ်ဆေးဝါး တိုက်ဖျက်ရေးနေ့ အထိမ်းအမှတ် အဖြစ် မူးယစ်ဆေးဝါးများ မီးရှို့ ပွဲ ပြုလုပ်သည့် အခမ်းအနားကို တက်ရောက်သဖြင့် ဗြိတိသျှ တို့က ၁၉၀၈ ခုနှစ်တွင် ပြဌာန်းခဲ့သော မတရားအသင်း အက်ဥပဒေ နဲ့ နမ်းဆန် နဲ့ လာရှိုးအကြားမှာ ဖမ်းဆီး... View details ⇨ View details
703 likes - 44 comments
Thaw Zin Aung yesterday at 02:09 brain waveကသူပုန်ထိရင်နာတယ် ကုလားထိရင်လည်းနာတယ် ဘုန်းကြီးဆဲရင်တော့ဝမ်းအားရရေးတော့တာပဲ
ချစ်သော ချစ်သူ yesterday at 00:26 Brain wave က ဘာလဲဟ လှော်နေပါ့လား သတင်းပြတ်သား သိရပီးမှရေး ပါ့လား အလှော် လာလုပ်နေ
06/27/2017 at 14:40.
နှစ်ရှိပါပြီ... View details ⇨ View details
06/27/2017 at 11:34.
တကယ်ခံရတာငါတို့တွေပဲ View details
2500 likes - 12 comments
06/27/2017 at 09:43.
ကာတွန်းဒိန်းဂျား View details
8999 likes - 65 comments
မနူဟာ သားတော် 06/27/2017 at 17:17 Khun Boom တော့အဲလိုလုပ်နိင်တော့မယ်ထင်တယ် Mu Koe Phyu
Phray Reh Lin Naing 06/27/2017 at 11:23 ဒေါ် Htet Hlwar အတွက် Htay Reh ဟင်းတခွက် ပုံမှန်